Shinlay: Mein Bekenntnis zur Selbstachtung
Posted by Shinlay at 10:08
ကျနော့်ကိုယ် ကျနော်အဖြစ် ရဲရဲ ရပ်တည်နိင်အောင် ကြိုးစားဆဲပါ။။
အဲဒီ ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကို စရိုက်ကြီးကို မပယ်နိုင်သေးလို့အလုပ်မှာ ခဏ ခဏ စိတ်ညစ်ရတယ် မရှင်လေးရေ...။
လုပ်စရာရှိတာ မခိုမကပ်လုပ် ပြောစရာရှိရင် တည့်တိုးပြောတတ်တဲ့ အကျင့် အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် အသေးမွှားကစ serious ဖြစ်လွန်းလို့ (ဒါသူများပြောအရ)တဲ့ တစ်ချို့ သော လုပ်ဖော်တွေရဲ့အမြင်ကတ်တာ ခံရတယ်။ ဒါပေမဲ့ လည်း မရှင်လေးရဲ့post ထဲကလို့ ပဲ Ich bin ich und ich bin o.k. ပါပဲ အစ်မ။
ဒီပို့ စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဂျာဂျာသင်ချင်ပါတယ် အစ်မရေ ပြောချင်တတ်ချင်လို့ တော့မဟုတ်ပါဘူး။
Most of all, one can be, if there is love. Is it not?